Maamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay fasax maanta la siiyey shaqaalaha + sababta | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay fasax maanta la siiyey shaqaalaha +...
Maamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay fasax maanta la siiyey shaqaalaha + sababta
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dib uga noqday fasax maanta la siiyey shaqaalaha ka howl-gala xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar, kaas oo ku aadanaa munaasabadda Ciidul Adxaa oo maalinta beri ah ku beegan.
Qoraal wargelin ah oo kasoo baxay xafiiska waaxda shaqada iyo shaqaalaha ayaa lagu sheegay in la-laalay fasaxii la siiyey shaqaalaha, kadib amar ka yimid duqa Muqdisho.
Sidoo kale waxaa qoraalkan lagu sheegay inay keentay ka noqoshada fasaxan baahi shaqo oo ka jirta xarunta gobolka Banaadir, loona baahan yahay in loo adeego bulshada.
“Iyadoo la fulinayo go’aanka duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka baahi shaqo awgeed waxa laga noqday fasaxi shaqaalaha maanta kaliya, sidaas darteed madaxda shaqaalaha xukunta waxa laydinku wargelinayaa in aad si degdeg ugu yeertaan shaqaalaha goobaha shaqadana saacad gudeheed la bilaabo shaqooyinkii,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale waxaa amarkan lagu sheegay in safaxa shaqaalaha ee Ciidul Adxaa uu bilaabanayo maalinta Talaadada oo berri ah, illaa Khamiista.
“Fasaxa berri ayuu ka bilaabanayaa, waana illaa Khamiis insha Allaah,” ayaa markale lagu yiri qoraalka.
Dhinaca kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay fasax yihiin shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaarka ah, munaasabadda Ciida aawgeed.
Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalaha Soomaaliyeed ay fasax yihiin seddex maalmood oo ka bilaabaneysa maalinta Talaadada oo noqoneyso maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa, illaa Khamiista soo socota.
Sidoo kale wasaaradda ayaa Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeysay munaasabadda Ciidul Adxaa.
Previous articleHirShabelle oo ka hortimid hadalkii Golaha Midowga Musharraxiinta mucaaradka
Next articleAffordable money Advance.Monetary Backup along with Cheap Payday Loans: Now Over two months
Sawirro: Saraakiil katirsan Booliiska AMISOM oo gacan ka geesanaya Amaanka Doorashada oo..
XOG: Wasiiro Qorshe Cusub Degsaday Kadib Ra’iisal Wasaaraha La Magacaabay
Daawo:Wasiir katirsan Nabad &Nolol oo bahdilay mucaaradka dowlada iyo Sanbalooshe kadib hadaladii maalmahan
XOG: Madaxtooyada oo soo Faragelisay Khilaaf hareeyay Fahad Yaasiin & Cumar Filish
Ciidan Gaar Ah Oo Axmed Madoobe Banaanka Keenay & Raggii Hubeysnaa Oo Xabsi Lagu Guray
DAAWO:Mid Ka Mid Ah Murashaxiinta Ugu Saameynta Badnaa Doorashada Puntland Oo Tanaasulay
SAWIRO:-Ra’iisul Wasaare Kheyre oo xariga ka jaray Xarun Ciidan
Ciidamada Dowlada oo Xabsiga Dhigay Dad Iska Soodiwaan Galiyay Al-shabaab
SAWIRRO:Jubbaland iyo Amisom oo ka shooray dagaal saf balaaran ah oo lagu qaado Shabaab